Imininingwane ebalulekile ye-leuprorelin acetate side effect, umthamo
I-1. Yini i-leuprorelin acetate?
I-2. Uhlelo lokusebenza leuprolide acetate
I-3. I-leuprolide acetate isebenza kanjani
I-4. Ungayisebenzisa kanjani i-leuprorelin acetate?
I-5. I-Leuprorelin acetate Dosage kanye ne-leuprorelin acetate Administration
I-6. I-Leuprorelin acetate side effect
Leuprorelin acetate luhlobo lwe-peptide elisetshenziswa kanye nezinye izidakamizwa ukwelapha umdlavuza wendlala yabesilisa. Kodwa-ke, akuselaphi lesi sifo kepha ukusivimba ukuthi singasabalali futhi kusize ekucindezeleni umphumela womdlavuza we-prostate emzimbeni wakho. ILeuprorelin iyathengiswa e-United States of America ngaphansi kwegama lomkhiqizo iLupron, futhi ingahle itholakale emazweni ahlukene ngaphansi kwegama lomkhiqizo elihlukile.
Iningi lezinhlobo zomdlavuza we-Prostate lincike kuma-testosterone ama-testosterone ukukhula nokukhula emzimbeni wakho. Kodwa-ke, i-Leuprorelin acetate powder isebenza ngokucindezela ukukhiqizwa kwama-testosterone ama-testosterone okwenza kube lula ukunciphisa ijubane lokukhula kwamaseli womdlavuza wendlala kanye nokunciphisa izinhlungu noma ubunzima obuhlangabezana neziguli ngenkathi uchama.
Ngakolunye uhlangothi, i-Lupron isetshenziswa ngabesifazane ukwelapha izimpawu ze-endometriosis, ezaziwa ngokuthi yi-uterine fibroids. I-Leuprolide acetate nokukhulelwa kuyinkinga enkulu kubantu besifazane, ungasiphuthi lesi sidakamizwa uma ulindele ukuba nengane kodwa ungaxoxa nodokotela wakho ngalokho. I-Lupron isidakamizwa esingavinjelwa okufanele sifakwe emsipha njalo ezinyangeni ze-1-6. Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi uthatha umthamo kudokotela wakho, kodwa futhi ungaqeqeshwa ukuthi ungazifaka kanjani ekuziphatheni ngokulawula imithamo lapho uhlala ekhaya lakho.
I-Leuprolide acetate buy itholakala kalula kuwo womabili amakhemikhali aku-inthanethi nawomzimba. Izindleko ze-leuprolide acetate ngezinye izikhathi ziyahlukahluka ngokuya ngokuthi uthenga kuphi. Kodwa-ke, kululekwa njalo ukuthola umuthi ofanele kusuka kudokotela wezokwelapha. Khumbula ukusebenzisa ngokweqile i-leuprorelin acetate kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu, futhi kufanele ugweme ukuyithatha ngaphandle kokuhlolwa udokotela. Umdlavuza yisifo esinzima, futhi akufanele uzibeke engcupheni yokuphuza umuthi wakhe nje. Xoxa nodokotela wakho ukuthola eminye imininingwane mayelana i-leuprorelin acetate powder umthamo.
I-Leuprolide acetate powder iyi-agonist enamandla ye-gonadotropin-ikhulula i-agonist, futhi kufakazelwe ukuthi ibalulekile kwizicelo ezihlukile zomtholampilo. Isibonelo, ekwelapheni i-uterine fibroids, umdlavuza wendlala yesibeletho, ukuthomba kokubeletha okuyisisekelo (isimo esiholela ekutheni izingane zifinyelele ebusheni babo kusenesikhathi kunokuba bekulindelwe), kanye ne-endometriosis. Kuzo zonke lezi zimo zezempilo, i-leuprolide ingasetshenziswa wedwa noma nezinye izidakamizwa. Lesi sidakamizwa singasetshenziswa futhi kanye neminye umuthi ukwelapha i-anemia, okuvela ku-uterine fibroids.
The leuprorelin acetate umthamo kufanele kungene emzimbeni wakho ngemisipha. Sebenzisa isirinji ye-insulin ye-U-100 ukuphatha umthamo wakho futhi uqinisekise ukuthi usebenzisa amasirinji anikezwe ngumenzi. Uma kwenzeka kufanele usebenzise isirinji ehlukile, bese usebenzisa okuyi-0.5-mL kuphela elahlwayo. Khumbula ukuthi i-leuprorelin acetate powder kufanele ixutshwe njengoba kuchazwe umenzi ngaphambi kokusebenzisa. Ukusabalalisa isixazululo kungenzeka kungakunikeze ukuhlangana okwanele. Ukusebenzisana kwe-Leuprolide kuzokusiza ekufezeni imiphumela yakho oyifunayo kepha uyakuthola njalo kudokotela wakho.
I-3. Ngabe leuprolide acetate isebenza kanjani?
I-Leuprorelin acetate indlela yokusebenza yesimo incike esimweni sempilo ngaphansi kokwelashwa. Isibonelo, lapho isetshenziselwa ukwelashwa komdlavuza wendlala yesibeletho, kwehlisa ukukhiqizwa kwama-testosterone, okusiza ukukhula nokwanda kwamaseli womdlavuza. Yize Leuprorelin Acetate powder (74381-53-6) Ukusetshenziswa akulwelisi umdlavuza wendlala yesinye, kuyasiza ekwehliseni izinhlungu nokukhula kwamaseli womdlavuza emzimbeni wakho. Kodwa-ke, umuthi ungathathwa wedwa, kepha abezokwelapha batusa ukuthi uwuphuze neminye imithi yomdlavuza wendlala yesifuba ukuze uthole imiphumela engcono.
Yize lesi sidakamizwa singavunyelwe ukuthi sisetshenziswe kwabesifazane emazweni athile, sikhombisile ukuthi siyasebenza ekwelapheni i-endometriosis. Lapha, umuthi usebenza ngokucindezela ukukhiqizwa kwe-estrogen emzimbeni wakho, okwaziwa kakhulu ngokuthi "ukuhlinzwa kwe-estrogen." Lapha, inqubo ye-Leuprorelin acetate yesenzo igxile kakhulu ekwehliseni i-estrogen, i-hormone ebhekene nezikhathi zakho. Uma uqala ukuthatha umthamo we-leuprorelin acetate, amazinga e-estrogen azokhuphuka amasonto ambalwa okuqala, ngemuva kwalokho amazinga e-estrogen azokwehla. Le nqubo ingamisa okwesikhashana izikhathi zakho, futhi ngenxa yalokho, izimpawu ze-endometriosis zizodedelwa.
Umdlavuza webele we-Leuprorelin acetate, ngakolunye uhlangothi, usiza ekulweni nesifo esibulalayo kubantu besifazane. Yize i-progesterone ne-estrogen kungeyona imbangela yomdlavuza webele, badlala indima ebalulekile ekusizeni ukukhula kwabo nokusakazeka. Ukukhiqizwa kwala ma-hormone amabili kungamiswa yinqubo yokuhlinzwa ukususa ama-ovari noma inqubo yokwelashwa.
I-luteinizing hormone ekhiqizwa i-pituitary gland, ibangela ukukhiqizwa kwe-progesterone ne-estrogen ngama-ovari. I-leuprorelin acetate isebenzisa ukucindezela ukukhiqizwa kwe-luteinizing hormone, ngaleyo ndlela inciphisa amazinga e-estrogen naweprogesterone emzimbeni wakho. Lokho kusho ukuthi ukukhula kwamaseli omdlavuza nokusabalala kuzoncipha, okwenza kube lula ukuthi umdlavuza webele ulawulwe.
Ukuphathwa kwe-leuprorelin acetate kungenziwa ngezindlela ezimbili ezinkulu ngomjovo oqondile noma i-powder, esivame ukwakhiwa kabusha nge-solvent ngaphambi kokuthatha umthamo. Odokotela bangabantu abahamba phambili ngokuphatha izinqubo zethu zombili, kepha uma uqeqeshiwe, ungakwenza kalula ekhaya.
(1) I-Leuprorelin acetate injekishini
I-Leuprorelin acetate injekishini umuthi osebenza isikhathi eside ofunwa i-intramuscularly futhi kufanele uphathwe ngudokotela wezokwelapha. Umjovo unikezwa kakhulu kanye ngenyanga noma kube kanye njalo nge-3, 4, noma i-6 izinyanga ngokuya ngesimo sakho. Ngakolunye uhlangothi, umjovo we-leuprorelin acetate kwesinye isikhathi unganikezwa njengokumiswa okuhlala isikhathi eside okwaziwa kakhulu ngokuthi (i-Eligard) okufakwe emisipha yakho njalo ezinyangeni ze-1, 3, 4, noma i-6.
Ngemuva kokuhlolwa kwezokwelashwa, udokotela wakho uzokucebisa ngokufanele futhi akunikeze umthamo omuhle kakhulu we-peptide powder. Isikhathi umjikelezo wakho wesilinganiso ozosithatha nawo uzonqunywa ngudokotela wakho ngemuva kokuhlola isimo sakho. Imijovo imvamisa iyahlukahluka kusuka kwesinye isiguli kuya kwesinye.
(2) I-Leuprorelin acetate powder reconstitution
Kwesinye isikhathi ungathatha isinqumo sokusebenzisa i-leuprorelin powder, okubuye kube yindlela enamandla yalesi sidakamizwa esinamandla esisiza ekulweni nezimo zempilo ezahlukahlukene, njengoba kushiwo ngaphambili. Kodwa-ke, i-Leuprorelin acetate powder kufanele ilungiselelwe kahle noma iphinde ibhalwe ngaphambi kokuthi ifakwe emisipha yakho. I-powder kudingeka ihlolwe futhi akufanele usebenzise isiponji esingcolile. Lapho ulungiselela i-leuprorelin acetate, sebenzisa i-diluent enikezwe ngumenzi wezidakamizwa. Skena ipulaki emhlophe ibe yisiqobelo kuze kube yilapho iqala ukujika, qiniseka ukuthi ubamba isirinji eqondile. Manje khipha i-diluent ngokucindezela i-plunger kancane imizuzwana engu-8 kuze kube yilapho i-topper yokuqala ifinyelela kulayini ohlaza okwesibhakabhaka maphakathi nomgqomo. Sonke lesi sikhathi gcina isirinji iqonde.
Kancane kancane hlanganisa i-powder ukuze uqinisekise ukuthi yakha ukumiswa okufana kokufana kwe-milky. Uma kwenzeka izinhlayiya ze-powder zinganyamalali ngokuphelele kwikhambi, thepha isirinji kuze kube yilapho zonke izinhlayiya zichithwa ngokuphelele. Ungathathi umthamo uma i-Leuprorelin Acetate powder (74381-53-6) ayikaze imiswe ngokuphelele. Ngemuva kokuphinda kwakhiwe, thatha umthamo wakho masisha kusukela ukumiswa kuxazululwe esikhathini esifushane kakhulu. Futhi, ungathathi noma yikuphi ukumiswa okungakaze kusetshenziswe emahoreni amabili ngemuva kokwakhiwa kabusha ngoba akunakho okuvikelwayo futhi kungaba yingozi empilweni yakho.
Ukuphathwa kwe-leuprorelin acetate kuphela noma kungumjovo, futhi ngaso sonke isikhathi kufanele uthole umthamo wakho kochwepheshe bezokwelapha ngemiphumela engcono. Njengoba usola nje ukuthi unesimo esingalashwa yileli peptide powder, ungalokothi uthenge bese uqala ukusithatha ngaphandle kokuhlolwa udokotela. Abenzi be-Leuprolide acetate kungakhombisa umthamo wezidakamizwa emiyalweni yokusetshenziswa, kepha lokho kungenzeka kungasebenzi kuwe.
Imizimba yabantu ihlukile, kanti imithamo ethile ingaba phezulu kakhulu ukukuveza emiphumeleni emibi ye-leuprolide acetate noma iphansi kakhulu ukwehluleka ukuletha imiphumela oyifunayo. Imithamo ye-Leuprolide acetate iyahlukahluka ukusuka komunye umuntu kuye komunye, futhi futhi inqunywa yisimo esiphathwa kanye nobudala bomsebenzisi. I-Leuprolide acetate iyisidakamizwa okufanele siphuzwe ngaphansi kokuholwa udokotela ngoba singaba yingozi uma sisetshenziswa kabi noma ngokweqile. Nazi ezinye zemithamo ehlukile ye-leuprolide acetate yezimo zezempilo ezahlukahlukene;
Umthamo wabantu abadala leuprorelin acetate womdlavuza weProstate
Lapha kunemithamo ehlukile engahle idide, kepha udokotela wakho uzokukhethela okufanele. Imithamo imi kanje;
I-1mg injekishini kanye ngosuku
I-5mg umjovo we-intramuscular okufanele uthathwe kanye ngenyanga.
Ungahamba futhi ukuthola i-22.5 mg ozoyithatha kanye ezinyangeni ezintathu.
Kukhona futhi umthamo wokujova we-30mg othathwe kanye ezinyangeni ezine.
I-45mg umjovo we-intramuscular ozowuthatha kanye ezinyangeni eziyisithupha.
Ungase futhi uthathe isinqumo sokuya ngokufakwa kwe-65mg kokufakelwa okuguquguqukayo kancane ngoba uzothatha kuphela umthamo kanye ngenyanga ye-12 noma ngonyaka.
I-Adult leuprorelin acetate powder umthamo we-Endometriosis
Umthamo onconywayo weziguli ze-endometriosis yi-3.75mg, okufanele ifakwe kanye ngenyanga cishe izinyanga eziyisithupha. Kukhona enye inketho lapho udokotela wakho angaphakamisa khona i-11.25mg, ozokujova kanye ezinyangeni ezintathu. Abesifazane abathatha i-leuprorelin ye-endometriosis kufanele futhi bacabangele ukuya ekwelashweni kwama-hormone, okulungele ukunciphisa izimpawu ze-vasomotor kanye nokulahleka kwamaminerali wethambo. Kodwa-ke, ukucabanga ngezinzuzo zokwelashwa ngakunye kufanele futhi kunikezwe kuqala uma ukhetha inqubo efanele yezokwelapha.
I-Pediatric leuprorelin acetate umthamo wokuthomba okuqondile
Ukuthomba okungenamqondo yisimo lapho izingane zihlakulela izimfanelo zabantu abadala kusenesikhathi njengoba bekulindelekile. Lapho ukuthomba kuqala ngaphambi kweminyaka yobudala ye-8 yamantombazane kanye ne-9 kubafana, kubhekwa njengokuqonda. Isimo singalawulwa ngokuthatha umthamo we-leuprorelin acetate. Kodwa-ke, isisindo sengane siyonquma umthamo ofanele wokwelapha lesi sifo. Ukweqiwa komthamo ukulandelayo;
Isisindo somzimba esingaphansi kwe-25kg umthamo onconywayo yi-7.5mg injekishini kanye ngenyanga
Ingane enesisindo se-25 kuya ku-37.5 kg kufanele ithathe umthamo we-11.25 kanye ngenyanga.
Ezinganeni ezingenhla i-37.5kg, umthamo onconyiwe umjovo we-15mg kanye ngenyanga.
Lapho uthatha imithamo yakho ye-Leuprolide powder, amazinga e-hormonal kufanele futhi ahlolwe ngemuva kwazo zonke izinyanga ze-1 noma i-2 ukuqinisekisa ukuthi kunokucindezelwa okwanele kwe-pituitary gonadotropin. Ukuhlolwa njalo kwezokwelapha kuzosiza udokotela wakho ukubheka intuthuko yokwelashwa kanye nokubhekana nanoma yikuphi ukuthuthuka okungahle kwenzeke ngesikhathi sokulashwa.
Khumbula, udokotela wakho ungumuntu ofanele ukusetha umthamo weLeuprorelin wabantu abadala nezingane ngemuva kokuhlola isimo sempilo. Kwesinye isikhathi ungahle welulekwe ukuthi uqale ngemithamo ephansi, engalungiswa nesikhathi ngemuva kokubona impendulo yakho yomzimba. I-Leuprolide acetate nokukhulelwa akuvunyelwe njengoba umuthi ungalimaza umntwana ongakazalwa. Abesifazane belulekwa ukuthi bangayiphathi le peptide powder lapho belindele noma lapho behlela ukukhulelwa noma nini maduze.
Ezimweni eziningi, lapho usebenzisa kabi noma udla izidakamizwa ngokweqile, kuzokuveza imiphumela emibi kakhulu; nokho, amandla womzimba wakho kwesinye isikhathi anganquma ukuqina kwemiphumela. Kwenzeka okufanayo lapho ungalandeli imiyalo yemiyalo ngenkathi uthatha i-leuprorelin acetate. Izexwayiso ze-Leuprolide zingahluka ngokuya ngezinto ezahlukahlukene, njengesisindo somzimba nokubekezelelana komzimba. Abanye abasebenzisi bathola imiphumela emibi ngisho noma bethatha imithamo ye-leuprolide ngenkathi iminye ingathatha imithamo ephezulu bese bejabulela izinzuzo.
Kukhona ezejwayelekile leuprorelin acetate imiphumela emibi ezingatholwa cishe yiwo wonke umsebenzisi, kepha ziyanyamalala ngokuhamba kwesikhathi. Imiphumela emibi esethukile iyingozi, futhi uma usuhlangabezana nayo, kufanele wazise udokotela wakho ngokushesha. Ngakolunye uhlangothi, kunemiphumela emibi engavamile ongeke ube nayo ngenkathi uthatha i-leuprorelin powder. Le miphumela emibi injengokulandelayo;
(1) Imiphumela emibi esejwayelekile ye-leuprorelin acetate
Izinhlungu ezizungeze indawo yomjovo
(2) Umphumela obubi we-leuprorelin acetate side effect
Uma kwenzeka uhlangabezana nemiphumela emibi elandelayo funa ukunakekelwa kwezokwelapha ngokushesha ngangokunokwenzeka;
Ukuphefumula okungajwayelekile noma okusheshayo
Ukwesineke noma ukudonsa kwezinyawo zakho noma izandla
Kunemiphumela emibi emincane ehambisana nalesi sidakamizwa. Kodwa-ke, ziqine lapho zenzeka. Ngakho-ke, kufanele wazise udokotela wakho ngaphambi kokuba kube kubi kakhulu. Kwesinye isikhathi zenzeka ngenxa yokusebenzisa ngokweqile, noma ukungahambi kahle komzimba futhi zihlanganisa;
Ukopha okwedlulele kowesifazane kwabesifazane.
I-Leuprolide acetate kanye nesifo sikashukela futhi kunenye imiphumela engemihle ongayizwa. Lesi sidakamizwa kuthiwa sandisa ingozi yokuba nesifo sikashukela.
Ukujula kwezwi kubantu besifazane
Izinkinga zokushaya kwenhliziyo
Sengiphetha, i-leuprorelin acetate ibonakalise umuthi omuhle uma isetshenziswa kahle ezweni lezokwelapha. Ngasikhathi sinye, i-leuprolide acetate buy iyatholakala ekhemisi lakho eliseduze, futhi ungenza i-oda lakho ezitolo ezahlukahlukene ze-intanethi. Kukhona abakhiqizi abaningi be-leuprolide acetate nabahlinzeki emakethe namuhla, kodwa ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi wenza ucwaningo lwakho ukuze uthole umkhiqizo wekhwalithi ngentengo efanelekile. The leuprorelin acetate intengo kuyehluka kumthengisi oyedwa, yingakho udinga ukwenza ucwaningo olufanele ngaphambi kokuthenga umuthi. Kodwa-ke, ungathathi umdlavuza webele we-leuprorelin acetate ngaphambi kokuthola umthamo ofanele kudokotela wakho.
Isihlabelelo, G., Gao, H., & Yuan, Z. (2013). Umphumela we-leuprolide acetate ekusebenzeni kwe-ovarian ngemuva kwe-cyclophosphamide-doxorubicin-chemotherapy esekelwe kwiziguli ze-premenopausal ezinomdlavuza webele: imiphumela evela kusigaba II sokuhlolwa okungahleliwe. I-Oncology yezokwelapha, 30(3), i-667.
I-Köhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C, Seitz, C., & Mueck, AO (2010). Umthamo ‐ osukela ocwaningweni ukuthola ukuthi kusebenza kangakanani nokuphepha kwe-1, 2, kanye ne-4 mg ye-dienogest nsuku zonke ye-endometriosis. I-International Journal ye-Gynecology & ama-Obstetrics, 108(1), i-21-25.
Tunn, UW, Gruca, D., & Bacher, P. (2013). Izindlela zokwakheka kwedepho yezinyanga eziyisithupha i-leuprorelin acetate depot form in umdlavuza we-Prostate osezingeni eliphezulu: ukuhlolwa komtholampilo. Ukungenelela kwemitholampilo ekugugeni, 8, 457.
UJohnson, SR, Nolan, RC, Grant, MT, Intengo, uGJ, Siafarikas, A., Bint, L., & Choong, CS (2012). Ukwakheka kwento engenzi kahle ehlotshaniswa ne-depot leuprorelin acetate therapy yokuthomba okuphakathi okuphakathi. Ijenali yezazi zezingane nempilo yezingane, 48(3), i-E136-E139.